Global Voices teny Malagasy » Afaka Naneho Hevitra Antserasera Ireo Vahiny Mpiasa An-trano ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Afaka Naneho Hevitra Antserasera Ireo Vahiny Mpiasa An-trano ao Singapaoro
Voadika ny 12 Septambra 2016 11:19 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Indonezia, Singapaoro, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta
Vahiny mpiasa an-trano mitaky fiarovana sy fari-piainana tsara tsara kokoa. Sary: Facebook / “HOME”
Ny Fikambanana Maha-olona ho an'ny Toekaren'ny Mpifindra Monina, na “HOME,” mikendry “hanome feo ho an'ny tsy afaka miloa-bava” ao Singapaoro amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra  (tranonkala iray antsoina hoe “NyFeoko”) ho an'ireo mpiasa mpifindra monina mba hanoratana sy hamoahana ny tantara, lahatsoratra, sary, sy tononkalon'izy ireo. Ny vondrona fisoloana vava dia manolotra fanampiana ho an'ireo mpiasa niharan'ny fanararaotana ihany koa.
Araka ny hita amin'ny lahatahirin'ny fanjakana , ahitana vahiny mpiasa 1,3 tapitrisa voasoratra anarana ao Singapaoro. Mihoatra ny 200.000 amin'ireo olona ireo no mpiasa an-trano, avy amin'ny firenena manodidina tahaka an'i Filipina, Indonezia, Myanmar, ary India ny ankamaroan'izy ireo.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nivoaka ny tatitra momba ireo mpiasa an-trano iharan'ny fikarakarana ratsy  ataon'ny mpampiasa azy ireo. Mitombo ny tranga fanararaotana, na dia eo aza ny lalàna vaovao natao hiarovana  ny zon'ny mpiasa an-trano. Tamin'ny volana lasa, nitatitra tantara  miendrika fanandevozana mihatra amin'ireo mpiasa vahiny maherin'ny 9.000 ny tranonkalam-baovao Singapaoreana.
Maro amin'ireo tantara sy tononkalo navoaka tao amin'ny NyFeoko no ahitana fijoroana vavolombelona mahavaky fo izay zara raha re na taterina ao Singapaoro. Manasongadina ny manjò ireo vahiny mpiasa an-trano ireo tantara ireo, tovovavy nandao ny fianakavian'izy ireo mahantra tao amin'ny firenena misy azy ireo tsirairay avy ny ankamaroan'izy ireo mba hitady fahafahana tsara kokoa ao Singapaoro.
Myrna Javier, ohatra, nanoratra tononkalo  momba ny ankizy iray izay miasa any amin'ny firenen-kafa ny reniny. Ity ny ampahany amin'ny tononkalo
Ry dada, nankaiza ny reny malalako?
Latsan-dranomaso, raha nanontany ilay ankizy kely.
Tsy afaka manome valin-teny marina ho azy ny rainy
Fa lasa nitady asa tany an-tanin-kafa ny reniny
Mba hanome fiainana tsara kokoa sy hanafaka anay rehetra amin'izao tolona rehetra izao.
Hafaliana voafafa no takalon'ny vola dolara.
Tsy fahampian'ny zava-drehetra, trano, sakafo ary akanjo rovidrovitra
Tsotra nefa faly feno fitiavana sy firaisan-tsaina.
Mangina ry zaza malala, mahareta sy manaova ny tsara.
Mbola hody i Mama malala
Mandra-pahatongan'izany, andeha hitsiky amin'ny masoandro sy ny volana
Hiaraka amintsika mandrakizay izy, tsy ho ela
Mpikambana sy mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny HOME nanatontosa hetsika firaisankina ho an'ireo mpiasa an-trano Filipiana nigadra ao Indonezia. Sary: Facebook / “HOME”
Mampiseho  ny zava-iainan'ireo mpiasa an-trano marobe niharan'ny fanararaotana ary nitady fanampiana tany amin'ireo vondrona tahaka ny HOME ny tononkalon'i Bhing Navato:
Rehefa nanapa-kevitra handao ny fireneko aho,
Ny tena mafy indrindra dia ny fandaozana ny fianakaviako.
Raha nijery ny zanako aho, nahavaky ny foko izany
Nandrotika ahy ny mason'ny vadiko manganohano.
Feno fanantenana aho tonga teto,
Nivavaka isan'andro aho mba ahafahako miatrika.
Miaraka amin'ny trano telo diovina mandritra ny herinandro,
Vary sy atody ny sakafoko, nahatonga ahy narefo izany
Tsy sahaza ny toerana fatoriako,
Na dia nanana kidoro, ondana sy bodofotsy aza aho.
Eo akaikin'ny dobon-trondro no toerana fatoriako.
Isak'alina aho niresaka tamin'ny trondro,
Tsara vintana ianao, manana toerana manokana.
Saika tsy voafehiko ny hatezerako indray andro
Raha tonga teo amiko izy tsy hilaza afa-tsy teny maharary.
Nijery azy aho ka nieritreritra hoe:
Hoavy ny andro mbola hanana ny lalako aho.
Tonga ihany nony farany, vita ny fifanarahana,
Nangataka mba hafindra, saingy tiany aho horoahana.
Gaga aho, fa tena tsy rariny izany
Niasa mafy aho, kanefa tsy noraharahiany.
Ka nanapa-kevitra hiala tsy misy filazana aho,
Ny mitsoaka no hany safidy azoko atao.
Nankany amin'ny HOME aho, nitari-dalana ahy izy ireo,
Nanampy ahy tamin'ny zavatra rehetra izy ireo, nampianatra ahy mba hatanja-tsaina.
Nahita aingam-panahy  hanampiana ny hafa i Desi, mpiasa an-trano Indoneziana niharan'ny fanararaotana:
Na dia tsy mahafantatra na inona na inona momba an'i Singapaoro aza aho raha tonga tao tamin'ny 2014, dia feno fanantenana. Saingy taorian'ny andro vitsy monja niasako, nanomboka nanararaotra mafy ahy ny mpampiasako. Nanampy ahy nandositra ny namako rehefa nahita ny tahotra teo amin'ny masoko sy ny mangana mivonto eo amin'ny tavako.
Nanome trano hialofana ho ahy ny HOME. Nikorontan-tsaina aho, raiki-tahotra sady tena nalahelo. Fikasana tsara no nitarika ahy hiasa ao Singapaoro ary tsy azoko no antony nampijaliana ahy mafy tahaka izany. Izany angamba no antony mahatonga ny olona maro tonga nanampy ahy.
Na dia lavitra aza ny fianakaviako, manana namana maro izay tena mifanohana aho. Tsy voatery ho menatra amin'ny fampijaliana aho satria tsy nanao zavatra ratsy. Ankehitriny, nahita nofy vaovao aho, iraka eo amin'ny fiainana: manampy ny hafa. Saingy voalohany indrindra, nanampy ny tenako aho.
Ity tononkalo avy amin'i Rosita Madrid Sanchez ity dia maneho taratra  ny tantaran'ireo mpiasa izay nianatra hampihatra ny zon'izy ireo:
Amin'ny maha mpiasa an-trano vahiny ahy, tany ivelany aho nandritra ny 7 taona, ary nandritra izany taona maro izany, nanampi-maso ny tenako aho. Noesorin'ny mpampiasa ahy ny zoko ary nalain'izy ireo ny tena izaho. Navelako nandeha fotsiny izany mba hahazoako dolara halefa ho an'ny zanako any an-trano.
Tsy afaka ny ho faly aho, tsy afaka ny halahelo aho, tsy afaka ny hahatsapa ny fahatsapana maha-reny aho satria tsy manan-jo hahatsapa izany. Saingy ianao amin'ny maha- mpampiasa, mahatsapa alahelo ve ianao rehefa lavitra anao ny ankizy, rehefa mandeha miasa any ampitan-dranomasina ianao? Mahatsapa ve ianao fa amin'ny fihainoana ny feon'ny zanakao,dia ho fantatrao fa salama izy ireo? Ahoana ny amiko? Mba reny koa aho, olombelona koa aho. Afaka mahatsapa izany fihetseham-po izany aho, afaka mahatsapa izay rehetra tsapanao aho.
Saingy manomboka izao, mijoro ho an'ny tenako aho. Mijoro ho an'ny zanako aho ary mijoro ho an'ny hoavin'izy ireo, ho an'ny hoaviko. Atsaharo ny fanavakavahana. Atsaharo ny fanampena-maso.
Maria Allen Cellan nandrisika  ireo mpiasa mpifindra monina namana mba hanohy hatrany ny nofin'izy ireo:
Na inona na inona nofinao, tokony tsy mitsahatra mampahatsiahy ny tenantsika mikasika ny antony mahatonga antsika eto amin'ny firenena vahiny isika, miasa mafy. Tokony ho eritreretintsika foana izay azontsika atao eo amin'ny androm-piainana. Mino aho fa ny ankamaroantsika dia tsy te handany ny fiainantsika manontolo amin'ny fiasàna any ampitan-dranomasina sy lavitry ny fianakaviantsika. Mila mamelona ny nofintsika ao am-pontsika isika, na dia natosika hiasa mafy kokoa hatrany isan'andro aza isika, miaritra ny fahoriana rehetra ateraky ny asa, ny alina tsy mahita tory feno tomany, ny alahelo te hody, ny hanoanana ary koa ny tsy fisian'ny fahalalahana sy ny fahamendrehana ho an'ny tenantsika. Tsy tokony ho verivery foana izany fiaretana rehetra izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/12/87962/
 lahatahirin'ny fanjakana: http://www.mom.gov.sg/documents-and-publications/foreign-workforce-numbers
 fikarakarana ratsy: https://globalvoices.org/2015/12/16/singapore-couple-on-trial-for-allegedly-starving-filipina-maid-for-15-months/
 maneho taratra: https://myvoiceathome.org/2016/04/25/human-rights/